Qarax Ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen shan qof oo Caawa ka dhacay Magaalada Bosaaso |
Qarax Ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen shan qof oo Caawa ka dhacay Magaalada Bosaaso
Qarax aad u xoogan badan ayaa la maqlay wax yar ka dib markii laga soo baxay salaad-dii Maqribka ,waxaana la sheegay in qaraxan uu fuliyay ruux naftiisa hudha ah oo isku soo xidhay waxyaabaha qarxa.
Tirada dhimashada ayaa la sheegay in ay gaarayso 5 qof oo uu ku jiro ninkii is-qarxiyay ,waxaana sidoo kale tirada dhimashada ku jira 3 qof oo shacab ah ah oo marayay goobta sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee degmada.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa dhaxeysa shirkadaha Towfiiq iyo Al-Hudda Phone oo ku yaala bartamaha magaalada Bosaaso gaar ahaan agaagarka isgoyska GAACA.
Ka hor inta uusan qaraxa dhicin,waxaa goobta ku sugnaa askar ka tirsan kuwa amaanka oo baadhayay gaadiidka iyo dadka isticmaala jidkan oo ah mid aad u mashquul badan , isla markaana ay aad u adeegsadaan gaadiidka iyo dadweyanaha-ba.
Waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amaanka magaalada Bosaaso oo horey ka bilaabay howl-galo xoogan ,waxaana gabi ahaanba la xiray isku socodkii dadka iyo gaadiidka ee jidka uu qaraxa ka dhacay.
Dad-goob-joogayaal ah ayaa sheegay in ay arkeen maydadka dhowr qof oo daadsan goobta uu qaraxa ka dhacay oo hadda ay adag-tahay in gudaha loo galo ,waxaana ciidamada goobta ku sugan ay kor u ridayaan xabado dadka lagu kala caydhinayo.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay faah-faahin ka bixiyaan weerarkan oo ilaa iyo hadda aysan cidna sheegan mas’uuliyad-diisa , isla markaana aad looga maqlay guud ahaan magaalada Bosaaso.
Ugu danbayn, warar aan si rasmi ah loo xaqiijin karin ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay intaa ka badan-tahay ,waxxaana weerarkan ka dib gabi-ahaanba hakaday ganacsiyadii goobta ka furnaa.